meaning — MYSTERY ZILLION
July 2009 edited July 2009 in C++
void ဆို တဲ့ စာလုံး က ဘယ်ကနေ ဖြစ်လာတာလဲ ဗျ။ ဘာကို တိတိကျကျ ဆိုလိုတာလဲဗျ။
[FONT=Zawgyi-One]When used asafunction return type, the [B]void[/B] keyword specifies that the function does not returnavalue. When used forafunction's parameter list, void specifies that the function takes no parameters. When used in the declaration ofapointer, void specifies that the pointer is "universal."[/FONT]
[FONT=Zawgyi-One]Ifapointer's type is [B]void *[/B], the pointer can point to any variable that is not declared with the [B]const[/B] or [B]volatile[/B] keyword. A void pointer cannot be dereferenced unless it is cast to another type. A void pointer can be converted into any other type of data pointer.[/FONT]
[FONT=Zawgyi-One]A void pointer can point toafunction, but not toaclass member in C++.[/FONT]
void ဆိုတာက return မပြန်ချင်ရင်သုံးတဲ့keyword ပါ။ Function တိုင်းက return ပြန်ရတယ်။ ဥပမာ insert(); လို ့ရေးရင် အဲဒီ function ထဲမှာ return ဆ်ိုပြီး integer တန်ဘိုးတစ်ခုခုရေးရတယ်( int insert(); )။ return မပြန်ချင်ရင်တော့void insert(); ပေါ ့။ function က return ပြန်စရာမလိုတဲ ့အခါ void ထည် ့ရေးပေါ ့....
အဲ...ဖရန် ့ပြောတဲ့void ဆိုတဲ ့စာလုံးက ဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော ့သတ်မှတ်ထားတာပဲလေ.... ဖရန် ့ရဲ ့နာမယ်က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ဆိုပါတော့:P အဲ..စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ကဘာအဓိပါယ်လည်းဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲ ? နာမယ်တစ်ခုပဲလေ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲ..ဥပမာ..ဖရန် ့က C++ ကိုထွင်တဲ ့သူဆိုရင် void နေရာမှာ monkey လို ့ပေးချင်ပေးပေါ့..............:D monkey insert(); ဆိုရင် return မပြန်ဘူးပေါ ့...:D:D:D ဖရန် ့လည်းသဘောပေါက်ပြီလို ့ထင်ပါတယ်...:5: